तीजको कथा | samakalinsahitya.com
दोस्रो दिन- नृत्य प्रतियोगिता
तेस्रो दिन- नारी शक्तिकरण विषयमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
'तीजमा नाच्नलाई चुरा र धागो चाहिँ एउटै मिलाएर किन्नु पर्छ है साथी हो !'
'दिदी, यसपाली तपाईको रातो साडी छ भने दिनोस् है । कति एउटै साडी लगाएर माइत जानू, पूरानो डिजाइन भइसक्यो । नयाँ किन्न सकिएको पनि होइन । '
'यसपाली त हाम्रो तीज मान्नै भएन जेठाजू खस्नु भएको छ ।'
'आफू त पन्ध्रदिन देखि तजिको दर खाँदाखाँदा घर भात राम्ररी खान पनि पाएको नै छैन ।'
'आ अब त सुन लगाउने जमाना पनि गयो । ग्यारेन्टीवाला किन्यो नयाँ नयाँ डिजाइनको अनि फेरिफेरि लगायो ।'
'मेरो श्रीमान्को त तीजमा म माइत गए भनेघरमा बास नै हुँदैन । त्यसैले मलाई माइत जान नै मन लाग्दैन ।'
'भाउजू तपारइँको माइतबाट लिन को आउँछन् -'
'म माइत गएको बेला टिल्ल खाएर मातेर घर आउने चाहिँ होइन नि बुझ्यिस्यो थाहा छ कि - '
'कमाइ हुने श्रीमानले त किनी दिन्छन् नि । आफ्नो त के गर्नु चाडबाड पनि नआए हुन्थ्येा जस्तो लाग्छ । आफूलाई किन्यो छोराछोरी नाङ्गै हुन्छन् भने जस्तो लुगा नै हुँदैन । छोराछोरीको मुख हेर्‍यो आफ्नो रहर नाङ्गै ।
'कहाँ उमेरले मात्र हुन्थ्यो - अहिले खाना पिनामा हेनोर्सन कस्तो मिसावट छ । चोखो र शुद्ध केही खान पाइदैन । '
'हो त दिनभर केही नखाइ त बस्न नै सक्दिन बा । हल्का जूस र फलफूल खाइनँ भने भुतुक्कै हुन्छु बा ।
'को नखाइ भनेको छ कोल्डडि्रङ्कस त खान भइ हाल्छ नि ।' पानी पो खान हुदैन नि !'
'म पनि हल्का जूस र फलफूल खान्छु तर अरूलाई चाहिँ ढाँटेर खादिनँ भन्छु अहिलेको जमानामा पनि को भोकै बस्छ । के गर्नु खान्छु भन्यो भने खिल्ली उडाउँछन् । उनीहरू प्नि खाँदा होलान् नि ।'
'उनीहरूले शिवजीलाई खुसी पार्न लिएका नि ।'
'श्रीमानको परलोक पनि सुखमय होस भनेर रे ।'
'भो । भो । यो व्रत पूजापाठको जमाना गयो । अब समानताको जमाना आएको छ ।'
'यो नारी पुरुष समान भन्ने कुरा, कुरा मात्र होला व्यवहार मा त खोई ।'
'खै यस्ता कुरा गर्दै गयो टाउको दुख्छ बरु केही नसेाच्यो लोग्नेले कमाएर ल्याएकै छन् । उनीलाई पनि कमाउन छोराछोरी पढाउन कति धौ धौ छ । मीठो खायो । खुसी भन्यो रमायो आनन्दले बस्यो ।'
'ए दिदी तपाईँका तीजका चुरा धागो र व्लाउजको सेट मिल्यो - '
'सुशीलाका जेठानी देउरानी त देखासिकी गरेर लाउँछन् । को भन्दा को कम भएर '
'गायत्रीको अगाडि त कसैले राम्रो साडी र गहना लगाउनै हुँदैन मुख लेपारीहाल्छे बई । '
'टिभी बन्द गर्दा हुदैन त - कि रेष्टुरेन्टमा हो - '
'अनि भुजा खाइस्यो । फि्रजमा चिकेन रोष्ट राखिदिएछु नि ! '
'ए ! त्येा खाइसकेर टिभी हेर्दैछु । तिमी चिन्ता नगर न तीज राम्ररी मानेर आउ ।'
'चाडै मन्दिरमा दर्शन गरेर कार्यक्रममा नाच्नु पुग्नु पर्छ है ।'
'यो तीजमा त बाटाघाटा मन्दिर, बजार चारैतिर रातै हुन्छ । मलाई त यो रातो रङ्गदेखि एलर्जी हुन्छ ।
'ए ! यो साले कस्तो कुरा गर्छ रातो रङ्गमा एलर्जी हुन्छ रे । त्यही रातो रङ्गमा कत्रो शक्ति छ । 'भैगो छोडदे यो हिजडा जस्तो कुरा गर्छ । मलाई चाहि' तीजमा दिदी लिन जान एलर्जी हुन्छ । दिदीकी सासूले नानाथरी गफ गरेर क्या वोर गर्छिन । लिन नजाऊ भएन । पोहोर त उनको आफन्तको एउटी छोरीसँग कुरा मिलाउन ठिक्क परेकी थिइन् ।'
'जे होस् तीजको बहानामा हाम्रो घरमा चाहिँ मीठामीठा खानेकुरा पाक्छन् ।'
'ए हजूर बेलुका आउदा छेाराछोरी लिएर माइत आइसक्यो है । मैले नानीहरूका फेरफार गर्ने कपडा बोकेर गएकी छु ।'
'यो तीजमा कहिले चेलीबेटीलाई खुसी पार्न सकिएन बा । जस्तो राम्रो साडी किनिदियो मुख खुम्चाउँछन् । हामीले बाउको सम्पत्ति खाएको रिस गर्छन । '
'आफ्नो त दाजूभाइ पनि कोही छैनन । तीजमा माइत जान रहर लागेर उधूम हुन्छ कहाँ जानू र ।'
'ए तरुनीवरुनी हो नाच है हामी ताली मार्र्छौ हाम्रा नाच्ने दिन गै गए ।
तयार छौ हैन ?
भगवानको भजन पो गाउनुपर्छ त यो फिलीमसिलीमको गीतमा के नाचेका होलान् ।
मादल बजाउने तयार छौ हैन ?
ल ल सुरु गर
... ..तीजको लहर आयो बरी लै ........
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : आईतबार,2फागुन, 2066